HomeWararka CiyaarahaArsenal oo iska ilaalinaysa in ay bar-barayso Guuldaradii ugu xumayd abid ee kulanka Everton
Arsenal ayaa doonaysa in ay iska ilaaliso in ay bar-barayso guuldaradii ugu xumayd abid ee ay kala kulanto Everton marka ay Toffees booqanayso Emirates Stadium Axada kulan ka tirsan horyaalka Premier league.
Masiirka Gunners ee Champions League ayaa gacmahooda ku jiray ilaa horraantii toddobaadkan, iyadoo guuldarro 2-0 ah ay ka soo gaartay Newcastle United si aad ah u wiiqday rajadooda afarta sare.
Arsenal ayaa bilaabi doonta maalinta ay laba dhibcood ka dambeeyaan Tottenham Hotspur oo ay ku jirto miiska kala saraynta waxayna ku qasban tahay in ay rajaynayso in Norwich City oo ku jirta kaalinta 20-aad ay guul lama filaan ah ka gaarto kooxda Antonio Conte barri.
Bar-baraha ka dhacaya Carrow Road uma badna in ay ku filnaato Arsenal marka loo eego farqiga goolasha ee ay ka hooseeyaan Tottenham, maadaama ay u baahan yihiin inay 16-gool ku garaacaan Everton.
Si kastaba ha ahaatee, guulihii laga gaaray Toffees aad ayay u adkeyd in ay soo gaarto kooxda Waqooyiga London xusuustii dhawaa, waxaana kooxda Mikel Arteta ay barbareyn kartaa rikoor aan loo baahnayn oo naadi ah maalinta 38-aad.
Haddii Arsenal ay si qaldan u soo baxdo natiijada ciyaarta Axadda, waxay noqon doontaa markii labaad ee taariikhdeeda oo ay afar guuldarro oo xiriir ah ka soo gaarto Everton.
Kooxda Arteta ayaa 2-1 ku garaacday Goodison Park horaantii xilli ciyaareedkan, iyadoo ciyaaryahanka reer Spain uu goob joog u ahaa Demarai Gray oo dhaliyay goolkii guusha daqiiqadii 92aad ee kooxdiisii ​​​​hore bishii December.
Gool uu iska dhaliyay Bernd Leno ayaa sidoo kale Everton 1-0 kaga badiyay Emirates Stadium xilli ciyaareedkii hore, kooxda Merseyside ayaa sidoo kale 2-1 kaga badisay Goodison bishii December 2020.
Arsenal ayaa hore afar guuldaro oo xidhiidh ah kala kulantay Everton horyaalka intii u dhaxaysay 1922 ilaa 1924, waxayna Gunners soo afjartay rikoorkaas kadib markii ay 3-2 ku garaacday meel ka baxsan garoonkeeda.
Intaa waxaa dheer, Arsenal ayaa kaliya hal guul ka gaartay lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay ka hortagto Everton horyaalka Premier League, laakiin rikoorkooda maalinta ugu dambeeya ayaa ka dhigaya akhrin wanaagsan.
Gunners ayaa kulanka axada u soo galaysa iyaga oo doonaya in ay guul gaadhaan kulankoodii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedka horyaalka premier League markii 11-aad oo xiriir ah, sidoo kale wax guuldaro ah lama kulmin 16-kii kulan ee ugu dambeeyay.